७७ लाख २५ हजार मात्रा खोप उपलब्ध
विश्व स्वास्थ्य संगठनले उपलब्ध गराउने कोभ्यास सुविधमार्फत नेपाललाई कुल ७७ लाख २५ हजार मात्रा खोप उपलब्ध भएको छ । तीमध्ये ६० लाख ३९ हजार मात्रा कोभिसिल्ड र १६ लाख ८६
इलाममा आँखा अस्पतालको सेवा सुचारु
इलाम, (नेस) । इलाम नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको इलाम सामुदायिक आँखा अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ । बुधबार एक कार्यक्रम गरी इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेत र उपमेयर सुशीला नेम्वाङले संयुक्तरूपमा उद्घाटन
पर्वत अस्पताललाई २ करोडको उपकरण हस्तान्तरण
पर्वत । जिल्ला अस्पतालमा २ करोड बराबरका स्वास्थ्य उपकरण हस्तान्तरण गरिएको छ । लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियअन्तरर्गत पर्वत जिल्लामा क्रियाशील आठ लायन्स क्लब र लियो क्लबको समन्वय र साझेदारीमा लायन्स क्लब
धुलिखेलमा ७० प्रतिशत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा
धुलिखेल नगरपालिकामा ७० प्रतिशत नागरिकले स्वस्थ्य बीमा गरेका छन् । तर, सरकारले नागरिकले अस्पतालबाट लिएको स्वास्थ्य बीमा बापतको सेवाको रकम भुक्तानी नगरेका केही अस्पतालले नागरिकलाई दिएको सेवा बन्द गरेका छन्
डा. नूतन नर्भिकमा
काठमाडौं, (नेस) । वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग एवम् टेस्टट्युब बेबी विशेषज्ञ डा. नूतन शर्माले नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा पूर्णकालीन सेवा शुरू गर्नुभएको छ । करिब १५ वर्षदेखि काम गर्दै आएको ललितपुरको
स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी तर रिफरको सास्ती
पाल्पा । सुविधा लिन गाहे भए पनि सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा पाल्पामा प्रभावकारी वनेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्ड पाल्पाका अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा जिल्लामा करिब ८३ प्रतिशत नागरिक
मन्त्री खतिवडाद्वारा खोप कार्यक्रमको शुभारम्भ
काठमाडौ‌ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले विद्यालय मै खोप केन्द्र राखेर विद्यार्थीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकास्थित भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको खोप केन्द्रबाट विद्यार्थीलाई खोप
थप १८४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २ जनाको मृत्यु
आज २ जनाको मृत्यु भएको छ भने २६७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
रक्त कोषिकाको जाँच गराउन आग्रह
ललितपुर, (नेस) । मुटु, सुगर तथा रक्तचापका बिरामीले समयसमयमा रगत तथा रक्त कोषिकाको जाँच गराउनुपर्ने सेन्टर ल्याबका डा. शंकर काफ्ले बताउनुभएको छ । नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान ललितपुर शाखा र
पुस ४ देखि बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । सरकारले १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणविरुद्धको खोप लगाउने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले यही पुस
पुस ४ देखि १२–१८ वर्षका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइने
कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनको अवसरमा महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डपमा रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नेविसङ्घ के यु मेडिकल कमिटीको समन्वयमा नेविसङ्घ क्षेत्र नं ५ धनगढी कैलालीले रक्तदान कार्यक्रमको
स्वास्थ्य शिविरबाट २ हजार बढीले लिए सेवा
वासुदेव शर्मा, जाजरकोट । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–२ लिम्सामा सञ्चालन गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा २ हजार बढी नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । बारेकोट गाउँपालिकाको समन्वय र कादुरी एग्रिकल्चरल एसोसियसन ब्रिटिस
थप २६५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, २ जनाको मुत्यु
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २६५ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । ७ हजार १ सय १४ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा २३८ जना
कोरोनाको अगुल्टो ओमिक्रोनको बिजुली !
काठमाडौं । यही मंसिर १० गते नामकरण गरिएको ‘ओमिक्रोन’को तागत के हो, विश्वका ठूला वैज्ञानिकहरूलाई पनि थाहा छैन, तर आजसम्म कोरोनाको यो भेरियन्ट देखिएका मुलुक २९ पुगेका छन् । नेपालको
१५ कलेजमा पीसीएल नर्सिङको भर्ना रोकियो
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत भएको भन्दै १५ नर्सिङ कलेजको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङ कार्यक्रमको भर्नामा रोक लगाएको छ । आयोगले सूचना जारी गरी विश्वविद्यालय, प्राविधिक
पशु र तरकारीमा हर्मोन सुई स्वास्थ्य जोखिममा
– डा. केदार कार्की (वरिष्ठ पशुचिकित्सक) आजकल पशुहरुमा दूध पगार्न तथा निथार्न सुईमार्फत अक्सिटोसिन हर्मोन दिने गरेको पाइन्छ । त्यसै गरी लौका, फर्सी, भ्यान्टा, गोलभेँडा, करेला, घिरौँला, काउलीजस्ता तरकारीहरुका स–साना
ट्रान्स फ्याट – सुनेको तर नबुझेको कुरा
– प्रा. डा. प्रकाशराज रेग्मी (मुटुरोग विशेषज्ञ) ट्रान्स फ्याट धेरै कम सुन्नमा आएको शब्द हो । यसबारे धेरैलाई जानकारी छैन । ट्रान्स फ्याट खानामा पाइने एकप्रकारको चिल्लो पदार्थ हो ।
भोकै बसेर लाभ लिनुस्
– डा. क्षितिज बराकोटी (प्राकृतिक चिकित्सक) हामी खानपानको स्वादमा रमाउँछौं । आवश्यकताभन्दा बढी र शरीरको प्रकृतिभन्दा फरक खानपान गर्छौं । यसबाट हाम्रो रगत, रक्तनली, मुटु, कलेजो, आन्द्रा, मिर्गाैला, फोक्सोलगायत शरीरका
आयुर्वेदीय जीवनशैली सौन्दर्यताको आधार
डा. रामदेव पण्डित (आयुर्वेद चिकित्सक) आयुर्वेदले व्यक्तिको आन्तरिक र बाह्य दुवै खालको सुन्दरतामा जोड दिन्छ । भित्री सुन्दरताको लागि आयुर्वेदका आधारभूत सिद्धान्तहरुको पालन गर्न उपदेश गरिएको छ भने बाह्य सुन्दरताको